के गरे कुस्त धन कमाइन्छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः कार्तिक ७, २०७४ - साप्ताहिक
के गरे कुस्त धन कमाइन्छ ?
- कृष्ण भट्टराई, सुव्रत आचार्य
निकै गाह्रो प्रश्न, कुस्त धन कमाउन अझ गाह्रो छ । सजिलोसँग सरल तरिकाले कुस्त धन कमाउन नसकिएला । यसका लागि मास्टर प्लान चाहिन्छ, कि त कालोबजारी गर्नुपर्छ, तर त्यस्तो धन जसरी कमायो त्यसैगरी सकिन्छ भन्छन् । त्यसैले मनलाई नै कुस्त बनाऊँ ।
इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्छ, ढिलै भए पनि प्रगति हुन्छ ।
- रेनुका थापा, गायिका
राम्रो व्यवसाय गरे कुस्त धन कमाइन्छ ।
- बीपी वाग्ले, गायक
हिम्मत नहारी मेहनत गर्ने हो भने कुस्त धन कमाउन सकिन्छ ।
- नवीन खतिवडा, गायक
राजनीतिमा लागियो र नेता भइयो भने ।
- भरत रेग्मी, भिजुअल सम्पादक
के गरी कमाइन्छ ? म त्यसकै खोजीमा छु । अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
- राजन घिमिरे, पत्रकार
आफूलाई सबैभन्दा धनी सम्झेर काम गर्ने ।
-कृषा चौंलागाईं, निर्मात्री
कि मेहनत गरे कुस्त कमाइन्छ, कि भष्ट्राचार गरे कुस्त कमाइन्छ हाम्रो नेपालमा ।
- शारदा थापा, समाचारवाचिका
म पनि त्यही सोचिरहेको छु, कसले बताउला तरिका ?
- सञ्जय बराल, रेडियोकर्मी
कालोबजारी गर्नुहोस्, व्यापार गरे पनि कर छल्नुहोस्, नेता भएर जनता ठग्नुहोस् ।
- शान्तिम कोइराला, गायक
सही पेसा अनि सही लगानीमा भाग्यले साथ दियो भने कुस्त धन कमाउन सकिन्छ ।
भाग्यमा लिएर आएको हुनुपर्छ ।
- बबिता मानन्धर, गायिका
दुईनम्बरी धन्दा र भ्रष्टाचार गरे ।
- विकास सुवेदी, भिडियो निर्देशक
समयको मागअनुसार सही तरिकाबाट दिमाग लगाएर, आँट गरेर, कडा मेहनत गरेपछि भाग्यले साथ दिए ।
- अलाइभ ग्लाइडर, व्यवसायी
यो प्रश्न त बिल गेट्स, विनोद चौधरी, अम्बानी ब्रदर्स, जुकरबर्ग, अलिबाबा डटकमका ज्याकहरूसँग पो सोध्नुपर्ने ।
इमान्दार भएर आफ्नो करियरप्रति ध्यान दिइयो भने ।
कुस्त धन कमाउन त कि चिठ्ठा पर्नुपर्छ कि गलत बाटो समात्नुपर्छ ।
इमान्दार एवं लगनशील भै धैर्यताका साथ मेहनत गरियो भने कुस्त धन कमाइन्छ ।
अरू काम गरे सुस्त धन कमाइन्छ । बजारको ट्रेन्ड हेर्दा हिट लोकगीत राखेर झुर कमेडी चलचित्र बनाउँदा कुस्त धन कमाइने देखियो । इज्जतलाई बाल मतलब गरेर राजनीति गर्दा पनि कुस्त धन कमाएर चुस्त हुने रैछ ।
- कुमार भट्टराई, निर्देशक/लेखक
धर्म र पाप भन्ने कुरा नि कहीं हुन्छ र ? भन्ने सोचियो भने ।
- अजय अधिकारी सुशिल, गायक
अहिलेको जमाना लगानीको छ । उचित रूपले लगानी गर्न सके, विचार पुर्‍याएर आफ्नो धन सुरक्षित गर्न सके । घर बसीबसी कुस्त कमाउन अहिले चलेको फेसन सेयरमा लगानी
गर्नु नै हो ।
- विजय अधिकारी, लेखक
प्रशस्त परिश्रम गरेर ।
- सुरबिना कार्की, अभिनेत्री
लक्ष्मी माताको राम्रोसँग पूजा गरेर अनि आफ्नो काममा लगनशीलता देखाएर ।
- रेखा पौडेल, संगीतकार
आफू सक्षम भए कुस्त धन कमाइन्छ ।
- अश्मि रिसाल, गायिका
मानिसले चालेको कदम बीचैमा नछोडी निरन्तर लागिपरियो भने त्यही कामबाटै धन कमाउन सकिन्छ ।
- विकास चापागाईं, अभिनेता
तस्करी र डकैती गरेर चाहिँ केही कमाइदैन है ।
आफूलाई रुचि भएको कुनै पनि क्षेत्रमा मेहनत गरेर काम गर्‍यो भने धन कमाउन सकिन्छ, तर त्यसका लागि त्यो कामप्रति आफू योग्य, सिर्जनशील तथा लचिलो हुनुपर्छ । धन कमाउन गाह्रो छ तर मेहनत गर्‍यो र काममा लगनशील भयो भने त्यही काम सजिलो हुन्छ ।
- पूजन थापा, मोडल
बिजनेस गर्दा ठीक होला नि, व्यापार अपार भन्छन् ।
- प्राश्ना शाक्य, गायिका
धेरै शिक्षा लिन सकियो भने धन पनि धेरै कमाउन सकिन्छ ।
- रमिता भण्डारी, मोडल
आफ्नो काममा लगनशील भएर मेहनत गरे नाम अनि दाम कमाउन सकिन्छ ।
- रचना शाक्य, मेकअप आर्टिष्ट
त्यसका लागि त कालो धन्दा नै गर्नुपर्छ कि ?
- भीम लिम्बू, गायक
बिल गेट्सको जीवनी पढ्न सल्लाह दिन्छु ।
- मौनता श्रेष्ठ, लेखक
कतिलाई कुस्त धन भन्ने हो ? पहिले यो कुरा निश्चित हुनुपर्‍यो ।
- वर्षा लेखी, मिस नेपाल इन्टरनेसनल
त्यही थाहा नभएर त दु:ख पाइएको छ...थाहा भएको भए त त्यस्तो कुरा कहाँ अरूलाई भनिन्थ्यो र ? बरु हजुरलाई थाहा छ भने भन्नु न सुटुक्क ।
- जानकी पन्थ, गायिका/गीतकार
नेपाल जस्तो देशमा कि त भ्रष्टाचार गर्नु पर्‍यो कि त विदेशिनु पर्‍यो, इमान्दारिताले कुस्त धन कमाउन गाह्रो छ ।
- मिङ्स लामा, गायिका
हात पाखुराले मेहनत, मनबाट संघर्ष अनि दिमागबाट सही व्यवस्थापन गर्न सके ।
मेहनत, सीप र बुद्धि लगाएर काम गरियो भने धन कमाउन सकिन्छ । नेपालमा चाहिं राजनीति गरेर नेता बने मात्र कुस्त धन कमाउन सकिन्छ ।
- पवन थिङ, गायक